Hopitaly Itaosy Nahazo efitrano fandidiana manara-penitra
Anisan’ny tanana be mponina indrindra ho an’Antananarivo Atsimondrano ny tanànan’Itaosy.
Mahatratra 444.167 mantsy ireo mponina ao aminy, misandrahaka amina kaominina miisa fito manodidina dia Ambavahaditokana, Bemasoandro, Itaosy, Andranonahoatra, Ambohidrapeto ary Fiombonana sy Ankadimanga. Mba ho fanampiana azy ireo ary indrindra fa ireo marary mila fandidiana sy ireo vehivavy saro-piterahana dia natsangana ao amin’ny hôpitaly CHRD Itaosy, ny efitrano fandidiana manara-penitra. Omaly no nanokanana tamim-pomba ôfisialy ny foto-drafitrasa, notarihin’ny Ministry ny Fahasalamam-bahoaka ny profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana. Ankoatra ireo marary mila fandidiana maika dia hahazo tombontsoa manokana amin’izao foto-drafitrasa izao ihany koa ireo ankizy latsaky ny 15 taona manana fahasembanana ara-batana. Anisan’ireny ireo bingo tokony hahitsy, ireo mivadi-tongotra…Ahitana efitrano fandidiana, famohazana, fanadiovana fitaovana, misy oksizena, fametahana platre ary efitrano fanaovana fizarana mihetsika na “reeducation fonctionnelle” ity foto-drafitrasa iray ity. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny Christoffel Blindenmission sy ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka no angady nananana izany rehetra izany. Mitentim-bidy 170.000 Euros kosa ny lela-vola lany tamin’izany. Efa misy moa ireo mpitsabo vita fiofanana hitantana sy handray marary eo anivon’ity trano fandidiana vaovao ity.